Mkpa ka inyochaa DNS Obodo Iji ụsụụ ndị agha na OSX? | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 21, 2019 Friday, February 22, 2019 Douglas Karr
Otu n'ime ndị ahịa m weghaara weebụsaịtị ha na nnukwu akaụntụ nnabata. Ha emelitere ntọala ngalaba DNS ha na ngalaba maka ndekọ A na CNAME mana ha nwere oge siri ike ịchọpụta ma saịtị ahụ ọ na-edozi akaụntụ nnabata ọhụụ (Adreesị IP ọhụrụ).
Enwere ihe ole na ole ị ga-ebu n'uche mgbe ị na-edozi DNS. Ghọta otú DNS si arụ ọrụ, ịghọta otú ngalaba ngalaba na-edeba aha gị si arụ ọrụ, wee ghọta otú onye na-elekọta gị si ejikwa ha abanye na ngalaba.
Kedu ka DNS si arụ ọrụ
Mgbe ị pịnyere ngalaba n'ime ihe nchọgharị:
A na-ele ngalaba ahụ anya na Internetntanetị sava aha ịchọta ebe a ga-ezigara arịrịọ ahụ.
N'ihe banyere arịrịọ ngalaba weebụ (http), ihe nkesa aha ga weghachite adreesị IP na kọmputa gị.
Kọmputa gị wee chekwaa mpaghara a, nke a maara dị ka nke gị Cache DNS.
A na-ezigara onye nwe ụlọ ahụ arịrịọ ahụ, nke na-eduzi arịrịọ ahụ n'ime ụlọ ma nyefee saịtị gị.
Olee otú gị na ngalaba na-edeba aha Ọrụ
Ihe edeturu na nke a… ọ bụghị ngalaba ọ bụla na-edeba aha n'ezie na-ejikwa DNS gị. Enwere m otu onye ahịa, dịka ọmụmaatụ, nke na-edebanye aha ha site na Yahoo! Yahoo! adịghị achịkwa ngalaba ahụ n'agbanyeghị na ọ dị otu a na nchịkwa ha. Ha bụ naanị ndị na-ere ahịa maka Nkwari. N'ihi ya, mgbe ị gbanwere ntọala DNS gị na Yahoo !, ọ ga-ewe ọtụtụ awa tupu mgbanwe ndị ahụ emelitere n'ezie na ezigbo ngalaba na-edeba aha.
Mgbe ndenye DNS gị na-emelite, a na-emezi ha n'akụkụ usoro ihe nkesa na ntanetị. Ọtụtụ oge, nke a na-ewe obere sekọnd iji mee. Nke a bụ otu ihe kpatara ndị mmadụ ga-eji kwụọ ụgwọ jikwaa DNS. Jikwaa DNS ụlọ ọrụ Elezie nwere ma redundancy na incredibly ngwa ngwa… mgbe ngwa ngwa karịa gị na ngalaba na-edeba aha.
Ozugbo agbanyere sava ,ntanetị, oge ọzọ usoro gị ga-eme arịrịọ DNS, adreesị IP ebe saịtị gị kwadoro ka eweghachitere. IHE: Buru n'uche na m kwuru oge ọzọ usoro gị ga-eme. Ọ bụrụ na ị rịọrọ na ngalaba ahụ, Internetntanetị nwere ike ịdị ọhụrụ mana usoro mpaghara gị nwere ike idozi adreesị IP ochie dabere na Cache DNS gị.
Olee otú gị ọbịa DNS Ọrụ
Adreesị IP ahụ nke sistemu mpaghara gị weghachite ma chekwaa abụghị naanị otu weebụsaịtị. Onye nwe ụlọ nwere ike ịnwe ọtụtụ ma ọ bụ ọbụlagodi ọtụtụ weebụsaịtị weghaara na otu Adreesị IP (nke bụ nkesa ma ọ bụ sava sava). Yabụ, mgbe achọrọ ngalaba gị site na Adreesị IP, onye na-akwado gị zigara arịrịọ gị gaa na folda nchekwa ahụ dị n'ime ihe nkesa ma nyefee ibe gị.
Esi edozi DNS
N'ihi na e nwere usoro atọ dị ebe a, enwekwara usoro atọ iji dozie nsogbu! Nke mbụ, ịchọrọ ịlele sistemu mpaghara gị iji hụ ebe Adreesị IP na-atụ aka na sistemụ gị:
A na-eme nke a ngwa ngwa site na imeghe windo Ọnụ na ịpị:
Ma ọ bụ ị nwere ike ime nyocha aha ihe nkesa na-akpọ aha:
Ọ bụrụ na imelite ntọala DNS na ngalaba na-edeba aha gị, mgbe ahụ ị ga-achọ ijide cache DNS gị wee kpochapụ arịrịọ ahụ ọzọ. Ikpochapụ gị DNS cache na OSX:
Nwere ike ịnwalegharị ihe ping or nlele iji hụ ma ngalaba ahụ na-edozi adreesị IP ọhụrụ n'oge a.
Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịhụ ma emelitere sava Internets DNS. Jide Ihe DNS kemfe maka nke a, ịnwere ike ịnweta akụkọ zuru ezu banyere DNS site na ikpo okwu ha dị mma. Flywheel nwere nnukwu DNS Checker na nyiwe ya ebe ha ga-aga ajụjụ Google, OpenDNS, Ọdụ, na Netwọk Nchọgharị iji hụ ma ntọala gị agbasawo nke ọma na weebụ.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ adreesị IP nke ọma gosipụtara n'ofe weebụ ma saịtị gị ka na-egosighi, ị nwekwara ike ịgafe sava Internetntanetị ma gwa usoro gị ka ị ziga arịrịọ ahụ ozugbo na Adreesị IP. You nwere ike mezuo nke a site na imelite faịlụ ụsụụ ndị agha gị na iwepụ DNS gị. Iji mee nke a, mepee Terminal na pịnye:
sudo nano / etc / ụda
Tinye usoro sistemụ gị wee pịa tinye. Nke ahụ ga-eweta faịlụ ahụ ozugbo na Terminal maka edezi. Bugharịa cursor gị site na iji akụ gị wee tinye akara ọhụrụ na adreesị IP nke ngalaba aha na-esote.
Iji chekwaa faịlụ ahụ, pịa njikwa-o na ahụigodo gị wee laghachi ịnabata aha njirimara. Wepu onye ndezi site na ịpị njikwa-x, nke ga-eme ka ị laghachi na akara iwu. Echefula iwepụ ebe nchekwa gị. Ọ bụrụ na saịtị ahụ abịaghị dị mma, ọ nwere ike ịbụ nsogbu mpaghara nye onye ọbịa gị ma kpọtụrụ ha ma mee ka ha mara.
Ikpeazụ dee… echefula ịlaghachite ụsụụ ndị agha gị na nke mbụ ya. Chọghị ịhapụ ntinye ebe ahụ ịchọrọ ịmelite na-akpaghị aka!
Site na ịgbaso usoro ndị a, enwere m ike ịchọpụta na ndenye DNS m na onye na-edeba aha na-aga n'ihu, ndenye DNS na werentanetị ga-adịkwa oge, nchekwa DNS nke Mac m ka ọ dị ugbu a, na DNS nnabata web ahụ ejirila ruo ụbọchị… ọ dị mma ịga!
Tags: ụsụụ ndị aghaping